သမီးလေး မွေးထားသော မိဘတိုင်း နောင်တမရခင် ဖတ်ထားသင့်သော ပို့စ်လေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်… – BaHuTuTa
သမီးလေး မွေးထားသော မိဘတိုင်း နောင်တမရခင် ဖတ်ထားသင့်သော ပို့စ်လေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…
December 19, 2020 admin Lifestyle, Story 0
လင်မယား၂ယောက်ချစ်ကြတယ် ယောကျာ်းကလဲ လူချစ်လူခင်တော်တော်များတယ်…သမီးလေးမွေးထားတယ်အခုဆို ၁နှစ်၃လ. ဖေဖေမေမေ မပီကလာပီကလာလေး ခေါ် တတ်ပြောတတ်နဲ့မိဘတွေအချစ်ပိုကြတာပေါ့
တနေ့ အဖေလုပ်သူက အလုပ် ညစာစားပွဲလေး လုပ်မှာမို့ မိန်းမ ရေ သမီး လေးကို တို့တွေ အပေါင်းအသင်းတွေကိုပြကြကြွားကြမယ်ပေါ့ မိဘတို့သဘာဝပါသားသမီးလေးပွဲထုပ်ကြတာက…ဆက်ပြောမယ်နော်….မိသားစုလိုက်ညစာစားပွဲကားမောင်းပြီးသွားကြလေရဲ့ သမီးငယ်လေးလဲ ဝူးဝူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ရီမောပြီး မိသာစုလေးပျော်ရွှင်နေကြတာ….
ဟိုရောက်တော့ အားလုံးစုကြဆုံကြလေ ရဲ့ လူ၁၅ယောက်လောက်ရှိတယ်….ပွဲပြီးသွားတယ်…ပြန်သူတွေပြန်ကုန်ကြတယ်…ခလေးလေးကတော့ အိပ်နေတယ်…..အဖေလုပ်သူက သူ့သူငယ်ချင်း၂ယောက်နဲ့စကားကောင်းတုန်း…..ဆိုင်ပိတ်ချိန်ကြ ပြန်ကြတယ် သူငယ်ချင်း ၂ယောက်က. မင်းအိမ်လိုက်မယ်လေကွာ…ငါလဲ လိုက်အိပ်မယ်….ဒီညတော့ အိမ်မပြန်တော့ဘူး….
အေး…လိုက်ခဲ့ သောက်ကြမယ်လေ အိမ်ကျဆက်ပြီး….အိမ်ကို ပြန်ကြပါလေရော…အိမ်ကျတော့မိန်းမရော ခလေးရော…အခန်းလေးထဲ ဝင် ပြီး အိပ်ကျတယ် ယောကျာ်း ကတော့
သူငယ်ချင်း၂ယောက်နဲ့စကားတွေပြောရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းသောက်လေရဲ့……ငါ့သမီးလေးကိုငါသိပ်ချစ်တာကွ….ဘာညာပြောပြဆိုကြတာပေါ့..ငါ့သမီးလေးက ငါရှိရင်ရပြီ ငါအိပ်ယာထဲ ဝင်ပြီးရင် ပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူး…အပျောက်မခံ ဘူး ဘာညာ ပြောဆိုရီမောပြီး အိပ်မောကျနေတဲ့ သမီးလေးကို သွားပွေ့ ချီပြီး အခန်းလေးထဲ ကနေ မ ခေါ် ထုပ်လာတာပေါ့…..
နမ်းလိုက်ရှူံ့လိုက် ပေါင်လေး ပေါခလေးလေးက အိပ်ရက်လေး…… အရက်တွေ အရမ်းမူးလာတယ်…… အနောက်ကဆိုဖာလေးကိုမှီ ပြီး အိပ်ပျော် သွားလေရဲ့ ခလေးလေးပေါင်ပေါတင်ရက်နဲ့……..
ည၂နာရီ ကျော် မိန်းမ လုပ်သူ စူးစူးဝါးဝါးအော်သံ အနက်ကြီးနဲ့ အတူတူ မိန်းမကိုယ်တစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်သတ် သွေး တွေရွှဲအိုင် ပြီး
အသက် အငွေ့မျှသာ ကျန်သော သမီးငယ် အလောင်းကို မိန်းမလုပ်သူပွေ့ပိုက်ထားသော မြင်ကွင်းကြီး တခု သူမြင်လိူက်တာနဲ့ အမူးတွေပါပြေထွက်ပြီး
ငါ့သမီးလေး ဘာဖြစ်တာလဲ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ဖေဖေ့သမီးလေးဆိုပြီး လင်မယား၂ယောက် အော်ဟစ်ငိုယို ပြီး အမေ လုပ်သူမှာ သတိလစ်မေ့မြော သွားလေရဲ့ အဖေမှာတော့ ယူကြူံးမရ.
ဘာလုပ်ရမန်းလုံးဝမသိတော့ ပူထူနေလေပြိး သမီးငယ်လေး အသက်ရှင်ရန်နှင့် မိန်းမ အတွက်ဆေးရုံကားကို ခေါ် ရဲများကို အကြောင်းကြားပေမဲ့လဲ သမီးလေးမှာ သေဆုံးသွားခဲ့လေပြီ………
ရဲတွေအိမ်ရှိ cctvမှတ်တမ်းများရှာဖွေ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ခါမှာတော့…သမီးငယ်လေး အိပ်နေတယ် အဖေလုပ်သူ လဲ အိပ် နေတယ်အမူးလွန်ပြီး ကျန်၂ယောက်လဲ မူးပြဲ နေတာပဲ
အဖေလူပ်သူ သူငယ်ချင်းထဲ ကတစ်ယောက်က အိပ်ပျော်နေတဲ့ သမီးငယ်လေးကို ပွေ့ ချဲီပြီး မီးဖို ခန်း ခေါ် သွားတယ် ခလေးလေးပါသွားတယ် ခလေးလေးနိုးနေပြီ အမေမတွေ့လို့ ငိုတော့မယ် အချိန်
လက်နီးစကို ခလေးပါးစပ်မှာ လုံးထွေး စွပ်ထိုးတယ်..ခလေးငယ်ကို ကာမ ဆက်ဆံဖို့ လူယုတ်မာကောင် တိရိစာန်ကောင်ဘောင်းဘီ ကို ချွပ်ပြီး မိန်းမကိုယ် ထဲ အတင်းထိုးသွင်း ယုတ်မာရက်စက် လေရဲ့
ခလေးငယ် လေးမှာမရုံးနိုင် အသံ လဲ ထွက်မရ ကာမ ဆက်ဆံခြင်းကို ဝမ်းဗိုက်ပွင့်ထွက်မတက်ခံနေ ရတယ် သည်းထံစွာ ငွေကြွေးတယ် အသံ လုံးဝမထွက်ခဲ့ဘူး ခလေးငယ်လေးသတိလစ်မေ့မြောတယ်…
ဗိုက်ထဲ က အူတွေပါမိန်းမကိုယ်အဝကနေ ပြူထွက်ကျတယ် ကာမဘီလူး က ခလေးကို ထပ်ဆက်ဆံသေးတယ်နော်၃ခါတောင် ခလေးလေး အသက်ပျောက်ရတော့မယ်…
အသက်ငွေ့ငွေ့ လေး ခလေး အမေ ရဲ့ အသံကြားလို့ ခလေးကို မီးဖိုခန်းထဲ ပစ်ချ ထားပြီး လူယုတ်မာနောက်ဖေးအပေါက်ကနေ ထွက်ပြေးသွားတယ်…..
ခလေး အမေ ရူးပြီ ….တစ်ကယ့်ကို အချိန် ခနလေးပါ …..အရာအားလုံးဟာ ခနလေးပါပဲ… နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကလဲ အိမ်က ဖုန်းဆက် ခေါ် လို့ ထပြန်သွားရှာတယ်….
ခလေးလေး ံအရမ်းဆိုးသွားတယ်ပဲပြောရမယ်…….ခလေးအမေလဲ တစ်လ လောက်အစာမဝင်အာဟာရပြတ်ပြီးဆုံးသွားတယ်…..ခလေးကတော့အဲ့ညဘဲ သေတယ်…..ဖအေ လုပ်သူ ကတော့
ဘဝတစ်သက်စာ နောင်တတွေနဲ့ လူတကာမုန်းခံ ခုထိကျန်သေးတယ် တဲ့………..သင့်သမီးလေးသင်ကာကွယ်ပါ. ယောကျာ်း လုပ်သူ က မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး ကျန်တဲ့လူတွေဆိုပိုဆိုး….ကိုယ်ယုံကိုယ်ခံပဲ
သူနဲ့က စိတ်ချရတယ် သူကတော့အဖေပဲအဖိုးအဖွားနဲ့ ပဲရပါတယ် ြစ်လာရင်အ ကိုယ့်ဘာသာခံ အရာအားလုံးဖြစ်သွားဖို့က အချိန်ခနလေးပါပဲ ဗီယက်နမ်က ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ…
သက်ငယ်မုဒိန်းမှူ့ အာလုံးနီပါးက ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းတွေရဲ့ အခြေံခံပါပဲ…ဗိလာနဲ့ ဆုံမန်နီရဲ့ ချစ်စရာသမီးလေး ဆူးနီဘူ သင့်မှာသမီးလေးမွေးထားရင် သမီးကို လူကြီးတစ်ယောက်က အရမ်းနာကျင်အောင်
လုပ်မယ်ဆို သမီးဘာလုပ်မလဲ အဲ့လူကြီးကလဲရှိနေတယ် ခလေးတွေကို ညာခေါ်ဖို့ စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ ပြောပြထားပါ သက်ငယ်မုဒိန်းကို မသိနားမလည်တဲ့ ခလေးကို အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချူပ်ထားရမယ်
သူနားလည်လာတဲ့ အခါကျ လူကောင်းလူဆိုးခွဲခြားသိလာလိမ့်လိမ့်မယ်…..ခွေးနဲ့ခြောက်လို့ရတဲ့ခလေးက ခွေးဆိုသိပ်ကြောက်တယ် ကြောင်ကြောက်တဲ့ခလေးက ကြောင်နဲ့ခြောက်လို့ရတယ်…
မသိနားမလည်ချိန်မှာ သူစိမ်းယောကျာ်းကြောက်တဲ့ခလေး သူကို နာကျင်အောင်လုပ်ဖို့ လိုက်ရှာနေသူရှိတယ်ဆို ခလေးက သတိထားတတ်တယ် ဟိုဂျောင်မှာ သမီးကြောက်တဲ့ကြောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုသလိုပါပဲ……….
”ကျီးပေါင်း အတွက် ကြပ်ထုပ်ပြု လုပ် နည်း”